Farmaajo oo bohol uusan kasoo bixi karin kusii socda | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo ayaa bohol uusan kasoo bixi karin kusii socda, sababo ku aaddan Fahad Yaasiin. Madaxweynaha ayaa waayay garbo siyaasaddeed oo muhiim ah kadib markii ay ku biireen dhanka Mucaaradka ah.
Siyaasiyiinta mucaaradka ah gaar ahaan kuwa musharraxiinta ah ayaa Axaddii iyo shalau waxay kusoo biiriyeen Gudoomiyaha Golaha shacabka iyo ku xigeenkiisa Muudey oo aad ugu dhow Farmaajo, sidoo kale Gudoomiyihii hore ee Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaari ayaa maanta ku biiray Shirka.
Inkastoo sababta shirkaasi ay u tageen warar kala duwan ay kasoo baxayaan, hadane waxay muuqataa in Farmaajo siyaasaddii uu watey daadka uu la degay.
Farmaajo oo ah nin siyaasad ahaan aad ugu liita ayaa aamisan in wax walbo ku xiran yihiin awoodda uu adeegsanayo, waana shaqsi aaminsan nidaamka ciidanka iyo in awood wax lagu heli karo.
Dadka falanqeeya arrimaha Siyaasadda ayaa rumeysan in Farmaajo haddii aanu wax degdeg uga bedalin xubnaha guddiga doorashada ay halis weyn ku imaan karto mustaqbalkiisa siyaasadeed.
DIGNIINTA DAGAALKA SOKEEYE
Daahir Maxamuud Geelle, oo kamid ah Musharixiinta Shirka uga socda maalintii 3aad ayaa shaaciyay in Farmaajo uu wado dhaq-dhaqaaq ka dhan ah kulankooda, oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka.
Geelle wuxuu xusay in sunadii qori isku dhiibka hogaanka dalka uu hadda khatar ku jirto, islamarkaana ay ka cabsi qabaan inay shacabka dhaafto doorashadda, isagoo ku eedeeyay Farmaajo inuu maleegayo afgembi dadban.
"Madaxweynaha waxaan u sheegaynaa in looga baahan yahay doorashooyin nabad ah, ha joojiyo colaadda uu hurinayo iyo awood-marooqsiga," ayuu yiri Daahir.
Farmaajo ayaa ka mas'uul ah xaaladda dalka uu marayo, maadaama uu jidkii ka leexiyay hanaankii doorashadda oo afartii sano mar dhici jirtay, taasoo musharaxiinta si siman oo dimuqraadi ah ugu tarmayayeen doorashadda.